Ogaden News Agency (ONA) – Daawo Jaaliyadda S.Ogadenya iyo Oromiya oo banaanbax ka dhigay Valletta ee dalka Malta
Daawo Jaaliyadda S.Ogadenya iyo Oromiya oo banaanbax ka dhigay Valletta ee dalka Malta
Waxaa banaabax ku maray wadooyinka iyo xafiisyada dawladda hortooda ee dalka Malta jaaliyadda S.Ogadenya iyo jaaliyadda Oromiya ee dagan halkaasi. Dadka banaanbaxa dhigaya ayaa dawladda u gudbiyay cabasho ay ku muujinayaan dhibaatada lagu hayo dadkooda ay kaga soo tageen dalka.
Wargaysyada dalka Malta iyo TV-yada dalkaasi oo faalooyin ka bixnayay xaaladda Itobiya ayaa ku tilmaantay xisbiga TPLF oo ka 6% dadka Itobiya inay haystaan 985 awood ciidanka iyo saraakiisha sare. Waxaa kaloo ay ka hadleen dagaalkii khadhaadhaa ee xuduuda Eretreeya iyo Itobiya ku dhex maray labada dal ka dib markay Itobiya soo gashay xadka dalka Ertreeya.
Banaanbaxan oo ah midkii ugu horeeyay ee dalka Malta lagu qabto ayay dadka Malta u dhashay ku fahmeen qadiyadda Ogadenya iyo dhibaatada lagu hayo shacabka Ogadenya. Jaaliyadda Malta ayaa sanadkan kusoo biirtay xooga jaaliyadaha S.Ogadenya ee dalalka Yurub.